आजबाट २९ बर्षमा पूजा – bampijhyala.com
२२ हजार ७८ परीक्षणमा ९ हजार २४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५ हजार ७६७ निको
दोलखामा आज थप ७७ जनामा कोरोना संक्रमण, अहिलेसम्म ५१७ जना संक्रमण, संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या ४१ पुगेको छ ।
२८ औ मदन भण्डारी स्मृती र त्यो सम्बोधन
गीता कपुरको सिउदोमा सिन्दुर ! सिन्दुर कसको नामको हो ?
Home > मनोरञ्जन > आजबाट २९ बर्षमा पूजा
आजबाट २९ बर्षमा पूजा
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:५२ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । वि.सं २०४९ साल वैशाखको १७ गते सिन्धुपाल्चोकमा पूजाको जन्म भएको हो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सफल नायिका पूजा शर्मा आजबाट २९ बर्षमा प्रवेश गरेकी छिन् । उनै, पूजा म्यूजिक भिडियो, टेलिभिजन हुँदै चलचित्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । पूजाले आफ्नो करिअरको सुरुवात चलचित्र ‘थ्रि लभर्स’ बाट सुरु गरेपनि उनको करिअर चम्काउने चलचित्र भने ‘प्रेमगीत’ हो ।
६ बर्ष अगाडि रिलिज भएको सो चलचित्रपछि पूजाको करिअरमा पछि फर्किएर हेर्नुपरेको छैन । यसपछि उनले अभिनय गरेका चलचित्रले बक्स अफिसमा सफलता र असफलता जे भोगेपनि, उनले भने सुखद यात्रा तय गरिरहेकी छिन् । पूजाले अभिनय गरेको चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बक्स अफिसमा हिट भयो । यो सँगै उनका फ्यानहरुले उनीप्रति गर्ने प्रेम पनि बढ्दै गयो ।
पूजाले ‘प्रेमगीत’ अगाडि ‘मेरो बेष्ट फ्रेन्ड, मधुमास, चंखे शंखे पंखे, अझै पनि’ लगायतका चलचित्रमा काम गरेकी थिइन् । तर, उनलाई सफलता हात परेको थिएन । चलचित्रमा सफलता हात नपर्दा धेरै पटक पूजा भगवान्को अगाडि रोएकी पनि छिन् ।
तर, आज उनलाई दर्शकले अथाहा प्रेम दिएका छन् । पूजाको करिअरको टर्निङ पोइन्ट निर्देशक सुदर्शन थापासँग भेटपछि भएको मानिन्छ । सुदर्शनले उनीसँग ‘मधुमास’पछि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छन् ।
सुदर्शनको निर्देशनमा पूजाले ‘मधुमास, चंखे शंखे पंखे, प्रेमगीत, म यस्तो गीत गाउँछु, रामकहानी, म यस्तो गीत गाउँछु २, सम्हालिन्छ कहिले मन’ लगायतका चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन् । पूजा पछिल्लो समयकी चर्चित र महंगी नायिका हुन् पुगेकी छिन् ।
उनले चलचित्रमा अभिनय गरेको १५ लाख भन्दा माथिको पारिश्रमिक वुझ्दै आएकी छिन् । म्यूजिक भिडियोमा पनि उनको क्रेज लोभलाग्दो छ । विभिन्न समयमा आफ्नै बोलीका कारण विवादमा समेत पर्दै आएकी यी नायिका पछिल्लो समय नायक आकाश श्रेष्ठसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा छिन् ।
तर, पूजा आकाशलाई आफ्नो साथी मात्र भएको बताउँछिन् । चलचित्र क्षेत्रमा सफल निर्मात्री र नायिकाको रुपमा परिचित यी नायिकाको जन्मदिन उनका फ्यानले धुमधामसँग मनाउने गरेका छन् । तर, यो बर्ष कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा लागू भएपछि पूजाका फ्यानले २ दिन अगाडि नै उनको घरमा पुगेर केक काटेका थिए ।
पूजालाई चलचित्रकर्मी र उनका फ्यानले सामाजिक संजालबाट शुभकामना दिइरहेका छन् ।
२४ घण्टामा थप ५ हजार ७ शय २७ कोरोना संक्रमित, ३३ को मृत्यु
दिनेश, मानस, भिम र पूनमको ‘एउटै तस्वीर’
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १५:२० bampijhyala 0
बाँपीझ्याला, मुम्बई, एजेन्सी । चर्चित कोरियोग्राफर गीता कपुर बलिउडका...
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:५२ bampijhyala 0
सलमान खानको नयाँ फिल्म १३ मेइमा ‘राधे– योर मस्ट वान्डेट भाई’
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौंं ,एजेन्सी । लामो समयदेखि दर्शकहरु बलिउड सुपरस्टार...
३० बैशाख २०७८, बिहीबार १३:५७ bampijhyala 0
३० बैशाख, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं, एजेन्सी । फिल्म दंगलबाट चर्चामा...
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १७:३० bampijhyala
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १७:१६ bampijhyala
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १६:०४ bampijhyala
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १५:२० bampijhyala
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार १५:१० bampijhyala
२२ हजार ७८ परीक्षणमा ९ हजार २४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५ हजार ७६७ निको १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:५२
दोलखामा आज थप ७७ जनामा कोरोना संक्रमण, अहिलेसम्म ५१७ जना संक्रमण, संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या ४१ पुगेको छ । १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:५२
२८ औ मदन भण्डारी स्मृती र त्यो सम्बोधन १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:५२
गीता कपुरको सिउदोमा सिन्दुर ! सिन्दुर कसको नामको हो ? १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:५२
प्रभु बैंकले ४ अर्ब बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्दै १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:५२